War Cusub-Shabaab oo sheegay inay dilayan Sheekh C/weli Sheekh Cali Cilmi | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
War Cusub-Shabaab oo sheegay inay dilayan Sheekh C/weli Sheekh Cali Cilmi
Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu ku hanjabay inay dilayan Sheekh C/weli Sheekh Cali Cilmi Yare, ka dib markii ay ku eedeeyen inuu u gafay Nabi Maxamed (NNKH).
Sheekh C/weli Sheekh Cali Cilmi Yare, ayaa waxaa toddobaadkan uu ka soo muuqday muuqaal video ah, oo uu ku soo bandhigay sawirka nin uu ku sheegay inuu yahay Nabi Maxamed (Caleehi Salaatu Wasalaam), inkastoo uu dib ka sheegay in sawirka uu soo dhigay uu yahay nin Maxamed lagu magacaabo, isla-markaana uu Sheekhiisu yahay.
Gudoomiyaha Ururka Al Shabaab ugu magacaaban Gobolka Mudug, ayaa sheegay in falka uu ninkaasi ku kacay ay ka argagaxeen shacabka Somaliyeed, ayna tahay arrin aan horey loo arag, loona maqal, isla-markaana aan uga dhicin Somaliya.
Sheekh C/qaadir Abuu Cadnaan, ayaa ku waramaya inay iska cadahay muuqaalka uu gafka ku galay ninkani, isla-markaana aanu is dhaafin karin khaladka uu ku kacay.
Sheekh C/qaadir Abuu Cadnaan, ayaa sheegay in xukunka ninkani uu yahay dil, wuxuuna yiri “Laba xukun meesha ma yaallaan, Kitaabka Ilaahay ninkaa wuu xukumay, wuxuuna ku xukumay gaalnimo iyo dil.”
Abuu Cadnaan oo la hadlay Radio Andalus, ayaa yiri “Ninkaa iyo madaxiisa Insha’Allah iskuma ooli doonaan. Mujaahidiinta iyo Muslimiintana waxa uga yaal, waxaa weeye ninkaa inay madaxiisa kala gooyaan, oo ay kala dheereeyaan.”